Ma waxaad deggan tahay HVB, hoyga dhallinta 16-20 jirka ah, guryaha gaarka ee dhallinyarada ama qoysaska carruur qaabbila?
Ma og tahay xuquuqahaaga iyo waxa aad sameyneyso haddii aan lagaa qancin xuquuqahaag?
Khadka carruurta iyo dhallinyarada ee IVO - markaad dooneyso inaad wax dheeraad ka ogaato xuquuqahaaga ama aad sheegato in aysan wax waliba ahayn sidoodii.
Ma jiraa xiriir kale oo aad la leedahay xafiiska gargaarka bulshada, isbitaalka maskaxda ama goobaha kale ee caafimaadka? Kolkaas waxaad heleysaa warbixin ku qoran bogga kale, halkaan riix >
Dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu waxay xaq u leeyihiin inay ku koraan bey’ad xasilloon oo ammaan ah. Halkaan waxaad ka ogaaneysaa xuquuqahaaga haddii meel lagu dejiyo.
Annagoo ka soconna IVO waxaan kugu soo booqaneynnaa hoyga HVB, guryaha gaarka ah ee dhallinyarada ama kuwa lagu kaalmeeyo si aan u ogaanno inaad ugu nooshahay ammaan iyo xasillooni. Halkaan waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah ee kormeerada aan sameynno.
Na soo wac ama internet nagu la sheekeyso ama e-meyl noo dir haddaad dooneyso inaad wax dheeraad ah ka ogaato xuquuqahaaga, ama noo sheeg haddii aadan caawimaad ka helin goobaha caafimaadka ama xafiiska gargaarka bulshada.